Fitoviana amin'ny fahazoana vaksiny miaraka amin'ireo maherifo amin'ny fizahantany manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Fitoviana amin'ny fahazoana vaksiny miaraka amin'ireo maherifo amin'ny fizahantany manerantany
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ny tsy fitoviana amin'ny fidirana amin'ny vaksinin'ny COVID-19 dia mety hanakana ny fivelarana ara-toekarena amin'ny sehatra rehetra. Arabia Saodita sy ny mpitondra fizahantany manerantany no mahatakatra izany. Ho avy ny FII amin'ny herinandro ambony, ary ny mason'izao tontolo izao dia mijery an'i Riyadh.
Ny Hoavin'ny Initiative Investment (FII) dia saika hihaona any Riyadh. Ny fizahantany amin'ity indray mitoraka ity dia hanana anjara lehibe amin'ny adihevitra ataon'ny mpitarika fizahan-tany manerantany.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany Ny fandraisana andraikitra amin'ny fahasalamana tsy misy sisintany dia mampatsiahy an'i Saudi Arabia sy ireo solontena avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao fa tsy hiasa ny fizahan-tany raha tsy milamina isika rehetra.
Ny fidirana amin'ny vaksininy dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Na dia betsaka aza ny firenena manankarena manana vaksiny be loatra, ireo firenena tsy dia manankarena dia maniry mafy ny hanao vaksiny ny olom-pireneny. Ny fanambinana ny lainga maro amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany.
Hatramin'ny 17 Oktobra, tany Etazonia, 65% amin'ny mponina no nahazo tifitra vaksiny COVID-1 farafaharatsiny, ny sasany kosa nahazo ny «booster» 19.
30% ny Amerikanina tsy mety manao vaksiny. Manolotra fandrisihana ho an'ireo izay manaraka ny “tolo-kevitra momba ny vaksiny” ny governemanta ary miaraka amin'izay mandrahona ireo izay tsy hanaraka ny sazy, toy ny fahaverezan'ny asa na fidirana amin'ny trano fisakafoanana.
Any Singapour, 80% ny tahan'ny vaksiny, any China 76%, any Japon 76%, Alemana 68% miaraka amin'ny vahoaka marobe mandà, Saudi Arabia 68%, UAE 95%, Israel 71%, ary India 50%, miaraka amin'izao tontolo izao eo ho eo amin'ny 48% izao.
Mihasarotra izao ny raharaha. Rosia dia 35% monja amin'ireo mponina vita vaksiny, ny Bahamas 34%, Afrika atsimo 23%, Jamaika 19% ary ny salan'isa any Afrika dia 7.7% fotsiny.
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina, eo ambany fitarihan'ny filoha Cuthbert Ncube, dia nanatevin-daharana ny hetsika WTN momba ny fahasalamana tsy misy sisin-tany hatramin'ny fotoana voalohany. Toy izany koa ny Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha.
Ny sekretera momba ny fizahantany any Kenya, Najib Balala dia iray amin'ireo mpitondra afrikanina voalohany manohana ny hetsika Health without Border nataon'i WTN. Izy izao no minisitra afrikanina voalohany namaly ny faneren'ny filoha amerikana Biden hampiala patanty ny vaksinin'ny COVID-19.
Tsy misy fandavana any amin'ny firenena ambany tahan'ny vaksiny; misy famoizam-po mafy hahazoana fatra ampy hahafahana mahazo ilay vaksinina amin'ny olona. Misy ny tsy fahampian'ny loharanom-bola hanovana vaksinim-panjakan'ny firenena manankarena.
Ireo mpitarika fizahantany manana fisainana manerantany, ao anatin'izany ny minisitry ny fizahantany Bartlett avy any Jamaika, dia nanampy tamin'ny fanekena ny satan'ny Saudi Arabia amin'ny maha mpilalao fototra manerantany azy.
Miaraka amin'ny FII ho avy eto Riyadh, sy mpitarika fizahan-tany miisa 1,000 amin'ny fiaramanidina ho any Arabia Saodita izao hanatrehana azy, ny minisitry ny kabary Bartlett dia mety hanana andraikitra manokana amin'ny maha-mpitarika manerantany an'i Riyadh amin'ny herinandro ambony. Mety ho ao an-tsainy ny fitoviana amin'ny vaksiny, raha jerena ny fizahan-tany any Jamaika dia voakasik'izany.
Ny World Tourism Network, eo ambany fitarihan'ny Founder Juergen Steinmetz, dia nahafantatra izany tamin'ny fifanakalozan-kevitra eran-tany tamin'ny dingana voalohany ary nanomboka ny fandraisana andraikitra Fahasalamana tsy misy fetra amin'ny fiandohan'ity taona ity hampahatsiahivana an'izao tontolo izao fa tsy hisy ho voaro amin'ny COVID raha tsy efa milamina ny rehetra.
Nisy ny fandrosoana natao nefa ny mampalahelo amin'ity dingana ity, mbola mitohy ny tsy fitoviana vaksinna, na dia mihoatra ny 6 miliara fatra aza ny vaksiny nozaraina manerantany. Ny ankamaroan'izy ireo dia any amin'ny tany misy vola be nefa ny firenena mahantra dia ambany ny iray isanjaton'ny mponina vita vaksiny.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, izay nahazo ny anaram-boninahitra a Maherifo momba ny fizahantany manerantany, mahalala izany ary mampahatsiahy eTurboNews fa ny tsy fitovian'ny vaksinina dia mety hanakana ny fanarenana eran-tany.
Tao amin'ny fivorian'ny komity momba ny fizahan-tany (CITUR), i Bartlett dia nampahafantatra ny paikadim-pahefana sy ny ezaka ataon'ny governemanta Jamaika hanalefahana ny fiatraikany ratsy amin'ny valanaretina amin'ny sehatry ny fizahantany.
Rehefa ny tontolon'ny fizahan-tany dia miantso 911, ny Fanjakan'i Saudi Arabia dia teo mba hamaly sy hanampy. Amina miliara dolara no natokana hamatsy vola amin'ity sehatra ity, tsy amin'ny KSA ihany fa manerantany. Ny minisitry ny fizahan-tany Saodiana, Andriamatoa Ahmed Aqeel Al-Khateeb, dia nanakarama ny talen'ny WTTC teo aloha ary ny minisitry ny fizahan-tany any Mexico, Gloria Guevara, ho mpanolo-tsaina azy ambony. Mahatakatra geopolitika i Gloria ary mahafantatra tsara ny zava-misy amin'ny toekarena miankina amin'ny fizahan-tany, toa an'i Karaiba.
Saudi Arabia mety mbola manandrana mitondra ny foiben'ny UNWTO avy any Madrid mankany Riyadh. Ny soso-kevitra toy izany ho an'ny UNWTO General Assembly ao Maraoka dia mbola azo natolotra. Farafaharatsiny farafaharatsiny mba nahatratra an'i Espana, firenena nampiantranoin'ny UNWTO ankehitriny, i Arabia Saodita, mba hahafahan'izy ireo miara-miasa sy mamerina ny fitarihana ho lasa Fikambananan'ny fizahantany manerantany.
Vonona ny hihaona any Riyadh amin'ny herinandro ho avy ny Ivotoerana ho an'ny Investment Future. Ny Minisiteran'ny fizahantany Saodiana dia nanasa mpitarika fizahantany an-jatony ho anisan'ity fivoriana ity.
Ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny manerantany dia mampidi-doza amin'ny fisokafan'ny sehatra indray, amin'ny fampandrosoana ny asa ary amin'ny fanambinana.
Ireo mpizahatany vita vaksiny dia azo inoana fa hisafidy toerana iray anaovan'ny vaksiny vaksiny ny mpiasan'ny hotely sy ireo mpiasan'ny fizahan-tany hafa. Toy izany koa no mandeha amin'ny lalana hafa. Ny mpiasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia te-hahazo antoka fa voaro sy vita vaksiny izy ireo. Tsy te hifandray amin'ny mpitsidika vahiny izy ireo raha tsy voamarina.
Raha noho ny antony ara-bola ny firenena iray dia tsy manana loharanom-pahalalana sy fahazoana miditra amin'ny vaksininy, izany dia toe-javatra iray iarahan'ny vondrom-piarahamonina fizahan-tany manerantany mifanampy sy mifanampy. Saudi Arabia dia afaka mitana ny andraikiny amin'ny maha-mpitondra erantany vao napetraka miaraka amin'ny fisainana malalaka sy vaovao, hanamorana sy hanitarana ny famatsiam-bola amin'ny hetsika tahaka izany. Azo antoka fa hivoaka ho mahery fo eran-tany i Saudi Arabia raha mahomby.
Ny fampiasam-bola amin'ny fidirana mitovy amin'ny vaksinina dia azo inoana fa mety hisy valiny lehibe ho an'i Saudi Arabia amin'ny teny antonony.
Ny fivoriana FII, noho izany, dia lasa manandanja kokoa isan'andro.